ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: Happy Birthday To Me !!!
ငါ့ဘ၀ရဲ့ ၂၈ခုမြောက် မှတ်တိုင်ကို စိုက်ထူရင်း
ကျန်ခဲ့သော မှတ်တိုင်များကို ပြန်ဆန်းစစ်
တွေ့ကရာစည်းဘောင်တွေနဲ့ လိုရာဆွဲ အဆိုအမိန့်
ချစ်လွန်းလို့ ဆိုပြီး ချော့သိပ်ခံခဲ့ရဖူးတယ်…
အနာဂတ်ကို ရင်ဆိုင်ရမှာ ကြောက်တဲ့လူထဲ ငါမပါခဲ့ဘူး
ကျေနပ်လောက်စရာ အတိတ်ကို ဟိုအရင်က မရခဲ့ဖူးလို့။
တစ်သက်မှာ တခါသာ နောင်တရဖူးရဲ့
နောက်တော့ အရင်ချည့် တ ခဲ့လို့ နောင်တ မရတော့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ပစုပ္ပန်ကို အသုံးချရင်း
ကိုယ့် ဒသန နဲ့ကိုယ်ပေါ့။
မနေ့က ငါနဲ့ ဒီနေ့ငါကို နှိုင်းယှဉ် ချိန်ထိုး
အိုး… ပိုတော်မနေရင် စိတ်ညစ်ခဲ့ဖူးတယ်
ခုတော့ မနေ့ကငါထက် ဒီနေ့ငါက ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစား
စိတ်ချမ်းသာစရာ တရားနဲ့ ငါနေတတ်ခဲ့ပြီ။
ကိလေသာမီး ဆယ့်တစ်ပါး ဘယ်လိုလောင်လောင်
သတိဆိုတဲ့ ရေနဲ့ အလျင်မီအောင် ငြိမ်းသတ်
တဏှာ ၃ပါး လောင်စာကို အပြတ်ဖြတ်ရင်း …
ငြိမ်းချမ်းအောင် သတိနဲ့နေတဲ့ ငါ့စိတ်ကို ဖျက်ဖို့
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 11:09 PM
Happy Birthdayနော်..ဒီနေ့ မှတ်မှတ်ရရ အဖေရဲ့မွေးနေ့လဲဖြစ်ပါတယ်
Happy Belated Birthday to you.. =)
မမ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ.. သတိရနေတယ်..
Thanksamillion for your Birthday wishes.
မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်များစွာတိုင် အေးချမ်း ပျော်
မွေးနေ့ကို မသိလိုက်ဘူး ..
ဒီနေ့မှ ရောက်လို့ ....
မွေးနေ့မှသည် .... ချစ်သောသူနှင့် ...
ယနေ့မှစ နှစ် တရာတိုင်ကွယ်......
Happy Birthday!! ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ။ အင်တာနက်မရတာ ကြောင့်နဲနဲနောက်ကျသွားပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘလောခ့်ရေးသားနိုင်ပါစေ။